စီမံကိန်းများ - Home Myan
* မြို့ပြ၏အလှကို ဖော်ပြသည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်တန်းမှီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို
The Centralက စတင် အကောင်ထည်ဖော်ခြင်း
SPRING LINE စီမံကိန်း
SPRING LINE စီမံကိန်းသည်
မြန်မာပြည်ရန်ကုန်မြို့တွင်မြင်တွေ့ရမည့် SOHO ကုန်သွယ်ရေး ပွင့်လင်းသည့် လုပ်ငန်းရပ်ဖြစ်သည်။
သုခရွှေပြည် Executive Apartment
🌈 သုခရွှေပြည် Executive Apartment 🌈
ပထမအရစ် ကျပ်သိန်း (၁၅၀) သွင်းရုံဖြင့် စီမံကိန်းအသစ်ရှိ မိမိနှစ်သက်ရာအခန်းအား ကျပ်သိန်း (၅၀၀) ဖြင့်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ ♦️♦️♦️
🎊🎊🎊 ယခုမှအရောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည့် စီမံကိန်း အသစ်ဖြစ်သောကြောင့် ပထမထပ်မှစ၍ မိမိစိတ်ကြိုက်
Times City Project
Times City Project….
ကျွနု​ပ်​တို့ Crown Advanced Construction Co.,Ltd မှတာဝန်​ယူတည်​​ဆောက်​ဆဲဖြစ်​​သော Times City Project ထဲတွင်​
​နေထိုင်​သူမိသားစုများ ​နွေး​ထွေးမှုရရှိ​စေရန်​နှင့်​စိတ်​ပင်​ပန်းမှုများ​ပြေ​ပျောက်​​စေရန်​အတွက်​ Condo လူ​နေအိမ်​ခန်းများပါရှိပါသည်​။
LakeAvenueResidence Luxury Condo
ကွန်ဒိုတွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ် သို့သော် လူကြီးမင်းတို့ ကွန်ဒိုအခန်းဝယ်တယ်ဆိုတာအခန်းတစ်မျိုးထဲဝယ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ
Kabaraye Executive Residence ဆိုတာ…………..
နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ အတွင်း ရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ မြေငလျင်တွေကို တွက်ချက်ပြီးမှ 97Z2B CODE နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ
I GREEN DEVELOPER
💢iGREEN ရဲ့ မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအတွက်……………
ဒီတစ်ခါမှာတော့ သီးသီးသန့်သန့်နဲ့ မြေပိုင်ဆိုင်မှုပါဝင်တဲ့ (2) ထပ်လုံးချင်းတိုက်များကို ရောင်းချပေးသွားမှာပါ
အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ Luxurious Lifestyle ကိုခံစားလိုပါသလား??
Diamond Inya Palace Condo ဟာအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အင်းယားကန်ဘေးမှာစိန်နန်းတော်ကြီးအသွင် မကြာခင်
ထွက်ပေါ်လာတော့မှာပါ။Diamond Inya Palace Condo ရဲ့ အားသာချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ???
BGS Construction and Development
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ…အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ BGS Construction and Development မှ
တာဝန်ယူဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင် တဲ့ အဆောက်အဦးပုံကြမ်းလေးများကို လူကြီးမင်းတို့ လေ့လာနိုင်ရန် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
🏡လူတိုင်း လူတိုင်းအတွက် ခိုလှုံနေထိုင်ရာ“အိမ်´´ဆိုသည်မှာ ဘ၀၏အရေးကြီးသော အရာများထဲတွင်တခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
ရန်ကုန်မြို့ မှာလူဦးရေထူထပ်ပြီးအလွှာမျိုးစုံနေထိုင် နေကြပြီးအိမ်ရာတွေမျိုးစုံလိုအပ်နေတဲ့ အထဲကမှ ဧရာချမ်းသာအဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုမီနီယံသည်
အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ဈေးနှုန်းသင့် အဆင့်မြင့် အိမ်ရာတစ်ခုအဖြစ်အကောင် အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ် နှင့်လာမည့်အနာဂတ် အတွက်ယခုလိုအိမ်ရာတွေ အများကြီးလိုအပ်နေအုံးမှာပါ။